i-SA U19s ilungele inxenye yokulungiselela i-World Cup
i-Coca-Cola South Africa U19s isiqedile ngokuzilolonga okokugcina ngaphambi komdlalo wabo wokuqala wokulungiselela i-2018 ICC U19 World Cup bedlala ne-India e-Christchurch, e-New Zealand.
Ovimbayo aphinde ashaye, u-Wandile Makwetu ugculusekile ngamalungiselelo eqembu futhi ukholwa ukuthi bakulungele ukuqala imidlalo yamalungiselelo ingekho indlela engcono yokuqala njengokubhekana neqembu elithandwayo, i-India.
Ekhuluma ngohambo leqembu liya e-New Zealand kanye nokuthi bahleli kanjani njengeqembu, uthe: “Kube izinsuku ezimnandi ezintathu. Uhambo belulude ukufika lapha kuma-nets kanye nasenkundleni yokudlala bekukuhle. Sihlale kahle futhi sabheka umsebenzi wethu ngakho siyajabula lapha esikhona.”
Njengoba bengakaze bayidlale i-series ne-India njengeqembu le-SA U19 eminyakeni eminingi, u-Makwetu uyathemba emathubeni eqembu lakhe futhi uyakholwa ukuthi abaqeqeshi kanye nabadlali benze okwanele ngaphambi komdlalo wakusasa.
“Imimoya iphansi kubafana,” esho eqhubeka. “Asikaze sidlale ne-India ngaphambilini ngakho kungaba kuhle ukubona ukuthi baphetheni. Abaqeqeshi sebewenzile amalungiselelo ngeqembu lase-India nathi futhi, kodwa ngicabanga ukuthi umdlalo wakusasa ungathi, hayi iqembu esidlala nalo. Kungokwenza izinto esikhulume ngazo kulezinyanga ezingu-12 ezidlulile, ngakho ngicabanga ukuthi asikhathazekile ngabo, sifuna ukwenza ekade sikhuluma ngakho.”
Lomdlali oneminyaka engu-19 wase-Goli uyena onemidlalo eminingi eqenjini futhi uyena kuphela owadlala kwi-World Cup edlulile. Ebeyinxenye yeqembu elaya e-Bangladesh nge-World Cup futhi sebefunde okuningi ngomdlalo wekhilikithi kanye nomsebenzi wakhe kusukela lapho. Uthe ufuna ukubona umdlalo onamandla eqenjiniuma bebhekana ne-India futhi ufuna badlale inhlobo yabo yekhilikithi.
“Ngicabanga ukuthi imidlalo yamalungiselelo eyokudlala ngendlela esifuna ukudlala ngayo. Nokho kungakuhle ukunqoba, imiphumela ayisho okukhulu, njengoba sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi sidlala ikhilikithi ngendlela esifuna ukuyidlala kanye nokuba nesiqiniseko sokuthi konke esikhulume ngakho siyaphuma futhi sizame nokwenza ukuze sibone ukuthi ikuphi okusebenzayo kanye nokungasebenzi. Ithuba lokuthi sibone ukuthi isimo sase-New Zealand silethani nokuthi sizame ukulandela izinhlelo zethu.”
Kubhekwe umdlalo kudlalwa ne-India, abaneqembu elinesipiliyoni, u-Makwetu ukholwa ukuthi ayalingana womabili amaqembu njengoba wonke umdlali kwiqembu le-South Africa sebeyidlalile ikhilikithi ye-senior provincial noma ikhilikithi yama-franchise.
“Sijabule kakhulu ngomsebenzi esiwenzile (amalungiselelo), akukho esikushiye ngaphandle njengobe besisekhaya futhi umsebenzi esiwenza manje e-New Zealand ukujwayela isimo, ukuba nesiqiniseko sokusifunda kanye nokwenza okufanele.”
“Iqembu lase-India linamagama ambalwa futhi banesipiliyoni, kodwa asidlali namagama. Ekugcineni kosuku sizophuma futhi kubhekane u-11 no-11 futhi sizodlala ikhilikithi ehamba phambili esiyaziyo.”
Umdlalo uzoqala ngo-10:30 (amahora angu-11 ngaphambi kwe-South Africa) e-Christ’s College.
u-Mahatlane uyajabula ngenqubekaphambili yama-U19 ngaphambi kohambo lokuya kwi-World Cup "Ukusebenzisa amakhono” kuzo ukhiye wokunqoba i-final ye-Youth Tri-Series kusho u-Gwavu i-England U19 inqoba kabili idlala ne-SA nokho u-Breetzke ethole ikhulu i-SA U19 ibuye kahle nge-bonus-point, nokunqoba nge-Duckworth-Lewis Ama-SA U19 alungele ukukhuphula izinga kumdlalo wokuqala we-day/night Youth ODI ekhaya u-Coetzee no-Molefe bahlelela i-SA u19 ukunqoba nge-bonus-point u-Van Tonder ufuna ukucacisa kumdlalo wokuqala we-Youth Tri-Series Molefe uthatha ama-wicket amahlanu kumdlalo wesibili oqedwe imvula u-Van Noordwyk uthatha okuhle emdlalweni wokuzilungiselela omiswe imvula i-CSA imemezela iqembu lama-U19 le-triangular series ne-England ne-Namibia Ukuhlulwa i-West Indies kwi-U19 series kumlimazile u-Mahatlane